မန္တလေးမြို့၌ ရေခွန်နှင့်အမှိုက်ခွန်များကို နေအိမ်မှပင် ပြေစာများတွင် ငွေပေးချေနိုင်သည့် QR Code စတင် ထည့်ပေးသွားမည် ~ Myanmar Online News
မန္တလေးမြို့၌ ရေခွန်နှင့်အမှိုက်ခွန်များကို နေအိမ်မှပင် ပြေစာများတွင် ငွေပေးချေနိုင်သည့် QR Code စတင် ထည့်ပေးသွားမည်
ယခုမတ်လအတွင်း ပေးဝေမည့် ရေခွန်နှင့် အမှိုက်သိမ်းဆည်းခအတွက် နို့တစ်စာနှင့်ပြေစာများတွင် ငွေပေးချေနိုင်သည့် Municipal Bills with QR Code စတင်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။ အိမ်ရှင်များအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် Mandalay Smart Pay MSP wallet Application ထည့်သွင်းကာပြေစာပေါ်တွင် ပါရှိသည့် QR Code ကို Scan ဖတ်ပြီး ငွေပေးချေမှုကို ၂၄ နာရီ မိမိနေအိမ်မှ ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြေစာတွင် ပါဝင်မည့် QR Code တွင် အခွန်ထမ်းအမည်၊ ပြေစာအမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ(အိမ်အမှတ်၊ အကွက်၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊ Zip Code)၊ အခွန်အခ အမျိုးအစား၊ (အိမ်ခွန်၊အမှိုက်သိမ်းဆည်းခ၊ ရေခွန်၊မြေခွန်)၊စည်းကြပ်ကာလ၊ စည်းကြပ်ငွေ စသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ ငွေပေးချေဖို့အတွက် MAB၊ AYA ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဝန်ဆောင်ခအခမဲ့ဖြစ်သည်။ QR Code ကို Scan ဖတ်ငွေပေးချေလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်ငွေနှင့် အိမ်၏အချက်အလက်အားလုံးမန္တလေးစည်ပင်ပိုင် ရတနာပုံဘဏ်သို့ ရောက်ရှိသွားမည် ဖြစ်သည်။
“အကြွေအနုတ်မရှိလို့ပိုပေးစရာမလိုတော့တဲ့အပြင် ငွေပေးချေမှုအပေါ်မှာ ဝန်ဆောင်ခတစ်ပြားမှမဖြတ်ပါဘူး။ QR Code စနစ်ရဲ့အခြားအားသာ ချက်တွေက ငွေပေးချေရတာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အပြင် Typing error ကြောင့် အမှားအယွင်းမျိုး လုံးဝရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး” ဟု မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာ ရဲလွင်က သူ၏ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှာ QR Code နှင့် ငွေပေးချေစနစ် အသုံးပြုကြရန် တိုက်တွန်းရေးသားထားသည်။ Mandalay Smart Application (early access) ကို Play Store မှာ ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး register လုပ်ကာ မတ်လ ၁၄ ရက်တွင် တရားဝင် စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MSP Application ကို မြန်မာနှင့် English နှစ်ဘာသာဖြင့် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ iOS မှာ Application အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် စီစစ်ခွင့်ပြုချိန် ကြာမြှင့်နေတာကြောင့် နောက်တစ်လခန့်မှ စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Account ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း (Topup) ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်တက်ပါက စည်ပင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ၊ AYA ဘဏ်ခွဲများ၊ ရတနာပုံဘဏ်ခွဲနှင့် အခွန်ကောက်ဝန်ထမ်းမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးစည်ပင်ကို ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အခအားလုံးကို (အိမ်ခွန်၊မြေခွန်၊မီးခွန်နှင့်အခြားအခွန်)ကို MSP Wallet ဖြင့် QR Code ဖတ်ကာ Mobile transfer ဖြင့် အလွယ်တကူပေးချေနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Mandalay Smart Pay MSP wallet Application ကို မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ရတနာပုံဘဏ်နှင့် 2C2P Co.,Ltd. တို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး MSP Wallet စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားကို မတ် ၁၄ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲမှာ မန္တလေးမြို့ MCC တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Ref : MRG #Myanmar_Online_News #TheMandalayNewsJournal
မန်တလေးမွို့၌ ရခွေန်နှငျ့အမှိုက်ခွန်များကို နအေိမ်မှပငျ ပြေစာများတွငျ ငွေပေးခေျနိုငျသညျ့ QR Code စတငျ ထညျ့ပေးသွားမညျ
ယခုမတ်လအတွငျး ပေးဝမေညျ့ ရခွေန်နှငျ့ အမှိုကျသိမျးဆညျးခအတွကျ နို့တစ်စာနှငျ့ပြေစာများတွငျ ငွေပေးခေျနိုငျသညျ့ Municipal Bills with QR Code စတင်ထညျ့သွငျးပေးသွားမညျဟု မန်တလေးမွို့တ်စောည်ပငျသာယာရေးက်မောတီထံမှ သိရသညျ။ အိမျရှင်များအနေဖြငျ့ မိုဘိုငျးဖုနျးတွငျ Mandalay Smart Pay MSP wallet Application ထညျ့သွငျးကာပြေစာပေါျတွငျ ပါရှိသညျ့ QR Code ကို Scan ဖတျပွီး ငွေပေးခေျမှုကို ၂၄ နာရီ မိမိနအေိမ်မှ ဆောငျရွကျ နိုင်မညျဖြစျသညျ။
ပြေစာတွငျ ပါဝင်မညျ့ QR Code တွငျ အခွန်ထမျးအမညျ၊ ပြေစာအမှတျ၊ နရေပ်လိပ်စာ(အိမျအမှတျ၊ အကွကျ၊ ရပ်ကွကျ၊ မွို့နယျ၊ Zip Code)၊ အခွနျအခ အမိုးအစား၊ (အိမ်ခွနျ၊အမှိုကျသိမျးဆညျးခ၊ ရခွေနျ၊မြေခွနျ)၊စညျးကွပ်ကာလ၊ စညျးကွပျငွေ စသညျ့ အချကျအလက်များ ပါဝငျသညျ။ ငွေပေးခေျဖို့အတွကျ MAB၊ AYA ဘဏ်များနှငျ့ ခိတ်ဆက်ထားပွီး ဝနျဆောင်ခအခမဲ့ဖြစျသညျ။ QR Code ကို Scan ဖတျငွေပေးခေျလိုကျသည်နှငျ့ တစျပွိုင်နကျငွနှေငျ့ အိမျ၏အချကျအလကျအားလုံးမန်တလေးစည်ပင်ပိုငျ ရတနာပုံဘဏျသို့ ရောကျရှိသွားမညျ ဖြစျသညျ။
“အွကွေအနုတ်မရှိလို့ပိုပေးစရာမလိုတော့တဲ့အပြငျ ငွေပေးခေျမှုအပေါျမှာ ဝနျဆောင်ခတစျပြားမှမဖြတ်ပါဘူး။ QR Code စနစျရဲ့အခြားအားသာ ချကျတွကေ ငွေပေးခေျရတာ ရိုးရှငျးလွယ်ကူတဲ့အပြငျ Typing error ကွောငျ့ အမှားအယွငျးမိုး လုံးဝရှိမှာမဟုတျတော့ပါဘူး” ဟု မန်တလေးမွို့တောျဝနျ ဒေါက်တာ ရဲလွင်က သူ၏ဖေ့ဘုတျအကောငျ့မှာ QR Code နှငျ့ ငွေပေးခေျစနစျ အသုံးပြုကွရနျ တိုက်တွနျးရေးသားထားသညျ။ Mandalay Smart Application (early access) ကို Play Store မှာ ရယူနိုငျပြွီဖစျပွီး register လုပ်ကာ မတ်လ ၁၄ ရက်တွငျ တရားဝငျ စတငျအသုံးပြုနိုင်မညျဖြစျသညျ။
MSP Application ကို မြန်မာနှငျ့ English နှစ်ဘာသာဖြငျ့ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုငျသညျ။ iOS မှာ Application အသုံးပြုနိုငျရနျအတွကျ စီစစ်ခွငျ့ပြုခိနျ ကွာမြှငျ့နတောကွောငျ့ နောက်တစ်လခနျ့မှ စတငျအသုံးပြုနိုင်မညျဖြစျသညျ။ Account ဖွငျ့လှစျခြငျးနှငျ့ ငြွဖေညျ့သွငျးခြငျး (Topup) ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်တက်ပါက စည်ပငျမွို့နယျအုပ်ချုပျရေးမှူးရုံးများ၊ AYA ဘဏ်ခွဲများ၊ ရတနာပုံဘဏ်ခွဲနှငျ့ အခွနျကောကျဝန်ထမျးမှတစ်ဆငျ့ ဆောငျရက်နွိုငျသညျ။ နောက်ပိုငျးတွငျ မန်တလေးစည်ပင်ကို ပေးဆောငျရမညျ့ အခွနျအခအားလုံးကို (အိမ်ခွနျ၊မြေခွနျ၊မီးခွန်နှငျ့အခြားအခွနျ)ကို MSP Wallet ဖြငျ့ QR Code ဖတ်ကာ Mobile transfer ဖြငျ့ အလွယ်တကူပေးခေျနိုငျတော့မညျဖြစျသညျ။
Mandalay Smart Pay MSP wallet Application ကို မန်တလေးမွို့တ်စောည်ပငျသာယာရေးက်မောတီပိုငျ ရတနာပုံဘဏ်နှငျ့ 2C2P Co.,Ltd. တို့ ပူးပေါငျး အကောငျအထညျဖောျ ဆောငျရွကျခြငျးဖြစျပွီး MSP Wallet စတင်မိတ်ဆကျခြငျး အခမျးအနားကို မတျ ၁၄ ရက်နံနကျ ၁ဝ နာရီခွဲမှာ မန်တလေးမွို့ MCC တွငျ ကျငျးပပြုလုပျသွားမညျဖြစျသညျ။